बहिनी पूजाले जब प्रदीप खड्कालाई बाकसमा थुनिदिइन् - कला - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
बहिनी पूजाले जब प्रदीप खड्कालाई बाकसमा थुनिदिइन्
नेपालखबर काठमाडौँ २१ कार्तिक
नायक प्रदीप खड्का यतिबेला सिनेमा ‘लव स्टेशन’को छायांकन सकेर आनन्दसँग तिहार मनाउने मुडमा छन्।
दशैँको समय चलचित्र छायाँकनका लागि दार्जीलिङ र सिक्किममै बिताएका प्रदीप यो तिहारमा भने बहिनी पूजाको हातबाट टीका लाउने तयारीमा छन्।
तिहार लगत्तै ‘लव स्टेशन’को बाँकी छायांकनका लागि मनाङ र जापान जाने तयारीमा रहेका नायक प्रदीप आफ्नो तिहार यस वर्ष विशेष नै बनाउने बताउँछन्।
एका मात्र बहिनीका दाजु प्रदीपका लागि बहिनी साथी समेत हुन्। आमा बाबुका दुई सन्तान प्रदीप र पूजा दुबै आफ्ना धेरैजसो कुरा एक अर्कामा सेयर गर्ने बताउँछन्।
दाजुबहिनीको सम्बन्ध र भाइटीकाका विषयमा नेपालखबरले कुरा गर्न खोज्दा प्रदीप बहिनीसँगको बाल्यकालको एक अविस्मरणीय घटनाको याद गरे। उनले टीकासँग सम्बन्धित भन्दा पनि दाजुबहिनीको उट्पट्ङको एक घटना बताए।
यस्तो छ प्रदीपले बताएको बाल्यकालको एक घटना (उनकै शब्दमा)
म त सानोमा निकै चकचके। मेरो चकचकेपन देखेर मलाई मेरा गुरुबा गुरुआमा सबै आजित हुन्थे। मेरो चकचकेपन कै कारण सानै उमेरमा मैले नेपाल टेलिभिजनको केटाकेटीको हल्लाखल्ला भन्ने कार्यक्रममा आफूजस्तै चकचके बालकको भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर पनि पाएको थिए।
केही न केही गर्नै पर्ने मेरो स्वभाव थियो। तर, बहिनी पूजा भने शालिन थिइन्। उनी मेरो बहिनी मात्रै नभएर खेल्ने र मन मिल्ने साथी पनि थिइन्। मैले उसलाई लहैलहैमा लगाएर आफूले गरेजस्तै अनेक उट्पट्याङ काम गर्न लगाथेँ। एकदिन बाबा मम्मी हामीलाई घरभित्र बस्न भनेर काम विशेषले बाहिर जानुभयो। दिमागमा केही न केही गर्न मन लागि हाल्यो। बहिनीभन्दा म अलि ठूलो नै भएकोले मैले ढोकाको चुक्कुल लगाए र हामी दाजुबहिनी खेल्न थाल्यौँ।
बन्द कोठा भित्र बहिनी र म खेल्दै थियौँ। त्यसपछि एक्कासी एउटा कुराले दिमागमा क्लिक गर्यो। हाम्रो कोठमा एउटा सानो टेबल थियो। टेबलको तलपट्टि बाकस आकारको सानो ठाउँ थियो। त्यहाँ चाबी लगाएर केही सामान राख्न मिल्थ्यो।
त्यो टेबलको बाकसभित्र पस्दा कस्तो हुन्छ भनेर मलाई अनुभव गर्न मन लाग्यो। अनि मैले बहिनी पूजालाई भने। बहिनी यो भित्र पसेर हेर्ने हो ? उसले पनि हुन्छ भनि। हामी सानै त थियौँ। अनि त्यो सानो बाकस भित्र मैले बहिनीलाई राखेर चाबी लगाएँ। एक छिन मै कराएपछि उसलाई बाहिर निकाले। बाहिर आएपछि सोधेँ कस्तो हुदो रैछ? बहिनीले भित्र त अँध्यारो कालो हुन्छ भनेर जवाफ दिइ। म झन उत्साहित भएँ।
उनलाई अब म भित्र छिर्छु अनि बाहिरबाट चाबी लगाउनु भनेर भने। अटाइ न अटाइ म भित्र छिरे। पूजाले बाहिरबाट चाबी लागाइदिइन्। एक त बल्लतल्ल बाकस भित्र छिरेको म त्यसमाथि भित्र सासै फेर्नै गाह्रो। म निस्सासिन थालेँ। भित्रबाट चाबी खोल भनेर बहिनी पूजालाई भने तर उनले खोल्नै जानिन्। मैले कराउन थालेपछि ऊ आत्तिएर रुन थाली।
अब कोठा भित्र चुक्कुल लगाएर बसेको हामी। बहिनीले न त ढोकाको चुक्कल खोल्न सक्ने न त त्यो बाकसको लक खोल्न सक्ने। म निकै आत्तिन थाली सकेको थिए। त्यसपछि मैले सोचेँ अब म सक्किएँ। बाहिरबाट कोही पनि भित्र आउन सक्दैन मलाई बचाउँन किनभने ढोकामा चुक्कुल लगाइसकेको छु। बहिनीले खोल्न सक्दिनन्। निकै बेर भइसकेको थियो।
मैले सम्हालिँदै बहिनीलाई चावी खोल्ने तरिका भित्रबाटै सिकाउन थाले। मैले चाबी जताजता घुमाउनु भनेको थिएँ बहिनीले उसैउसै गरिछन्। भाग्यवस चाबी खुल्यो। त्यो घट्नाले मेरो सात्तो नै लग्यो। त्यसपछि मेरो चकचकेपनमा बिस्तारै कमी आउन थाल्यो। मलाई त्यो घटनाले एउटा पाठ नै पढायो।
प्रकाशित २१ कार्तिक २०७५, बुधबार | 2018-11-07 16:52:49